Luba Marqos Marga Tajaajilaa Waangeelaa Ma’ikelawiti Dararaama jira.
Luba Marqos Marga Tajaajilaa Waangeelaa fi maatii isaa" Waaqayoo Saba Oromoo iyyata isaa ni dhaga'aa yakka hin qabnu".
Luba Marqos Marga tajaajiaa waangeelaati male nama siyaasaa akka hin ture Maatiin isaa hundi afaan tokkon nuu ibsan jiru. Mootumman Ethiopia Luba Marqos Marga Ma’ikelawiti hidhun reebicha(Torture) hama fi dararaamni cimmaan irratti geggesa jirachuu isaa uffataa isaa fi qama isaa irraa mulata jeedhani jiru. Lubi Marqos yeroo amma nyata isaaf deemuu ilee nyachuu akka hin dandeenye maatiin isaa ibsani jiru. Mootummaan kun luba kana tajaajila waangeelaa malee oggannaa siyaasaa akka hin ture utuu beekuu Oromoo ta’ee dhalachuu isaati dararaamni suukanessan akka irratti raawwatama jiru namoon luba Marqos Marga beekan hundi dubachaa jiru.
TPLF dula walda Amanta fi Tajaala Amanta nama waaqaa Ma’ikelawi keessatti reebicha(Torture) haman dararaama jirachuu isaa irra iyuu, hanga yoonati himata malee ji’a 2 gutuu seera fi heera male maatii isaa irra butani lafaa jalatti reebicha hama irra ga'een halaa yaadesa keessa akka jiru miseensoon walda fi maatiin isaa waldalee amanta hundi nu qaqaba jeedhan iyyacha jiru. Namni kun tajaajila waangeelaa male hojeeta siyaasaa akka hin tane waan namni hundinu beekudha, Oromoo ta'uu isaa qoofan dararaama akka jiru. Dhabbileen mirga namaf falmaatan fi Waldaleen Kirstiyaan Addunya hundi Marqos Marga hikamee akka maati isaaf walda isaatti deebi’uu gaafachuu qaban jeedhu miseensoon walda Kirstiyaana Oromoo.
Mootumman Ethiopia nannoo Oromiyaa wagga 2 ol seera humna warraanaan (State Emargency) bulchaa jirachuu isaa irraa darbe Ethiopia gutuu iyuu ji'a 6 state emargency jalati bulchaa jira. Giduu kana ilee state emargency sana ji'aa 4 itti dheerese jira, Ethiopia keessatti Caasaan Mootumma badee Caasaa warraanan uummata dararaama jiru keessatu Oromiyaan Zooni Warraana 8 jalati bula jirti. Lubi Marqos Marga seera fi heera mootumma Ethiopian basan ala yakka tokko malee Oromoo ta’uu isaan namni waangeelaa malee meesha tokko harka hin qabne reebicha sukanessan irratti rawwatamun Mootumman TPLF amanta Kiristyaanf ilee kabaja akka hin qabne agarsiisa. Kun kan mullisu heerii fi seerii biyyatti jirachu dhabuu isaa fi humni warranaa waan barbaade uummataa irratti raawwachaa jirachuu isaatti.
Kanaafuu, Waldaaleen Kiristyaana Oromiyaa, Ethiopia fi Waldaan Kirstiyana Addunya lubuu luba Marqos Marga bararuuf sagalee isaan ol kassan dubachuu qabu. Waldaleen hundi Tajaajilaa waangeela Oromoo ta’ee dhalachuu isaatti dararama jiru kanaaf sagalee ta’uun iyyachuuf, mana hidhati deemani gaafachuun, Waldan Fannnoo Diima Addunya ilee Haalaa Lubi Marqos Marga irra jiru hubate Iyyaata isaa dhaabbilee mirga dhala nama fi Mootummoota Addunyati akka iyyatan Miseensoon Walda Oromoo gaafacha jiru. Nama Wangeela akkasiti dararun goochan TPLF raawwate kun goocha Dargin duri Luba Gudina Tumsa irrati raawwaten wal fakata ta'uu isaa miseensoon Walda kun ibsan jiru.
Lubi Marqos Margan Abbaa Maatii fi Mucaa dhiira dubarti ulfa mana qula keessati dhisee kan hidhame yamuu ta’uu maatiin isaa ilee haalaa gadisisa keessa akka jiran namoon ijan argan gadan dubatu. Haatii Mana luba Marqos Addee Bashatuu Fiqaadu Danu mana jidhaatti baayee midhamu isaa fi dubachuu ilee kan hin dandeenye ta’uu isaa ibsatan jiru. Namni kuni umurii isaa keessatti yakka tokko ilee kan hin raawwatne sagalee waaqayoon ala jeecha hama tokko ilee kan hin duubane Oromoo ta’uu isaan qoofa dararaama kan jiru ta’uu isaa maatiin isaaf miseensoon waldaa nuu ibsani jiru.
Lammiin Oromoo hundi yakka gara jabina mootumman TPLF lammii Oromoo Oromumman yakke luba walda waangeela qoofa harkati batuu reebiichaa (toturchi) hama irratti goodhe daraarun qama sanyii dhugguuga Oromoo irratti raawwatama jiru ta’uu, Dhaabbilee Mirga dhala namaf falmatan, Mootummoota Addunya Mootummaa Ethiopia garggarani jirachisan kan akka USA fi EU, Waldalee Kiristyana Addunya hundaf iyyata Luba Marqos Marga Dhaabbileen Oromoo hundi sagalee isaan akka dhageesisanf kabajan gaafana. Haawwassi Oromoo fi Medialeen Oromoo yakka luba kana irratti raawwatamu balaleefachuun maatii isaa mana qulaa keessatti rakkacha jiran akka yadatan kabajan isiin beekisifna.